नितीनियम Archives - HealthyKhabar
स्वास्थ्य मन्त्रालयको कानुन उपसचिवमा बस्नेत
काठमाडौँ, १९ असार । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कानून उपसचिवमा मानबहादुर बस्नेत आउनुभएको छ। उहाँ यसअघि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कानून उपसचिवको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव पुस्करराज नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ ।
काठमाडौं,२४ चैत । सरकारले कोरोना भाइरस रोग विरुद्धको अभियानमा खटिने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई एक पटकको लागि प्रोत्साहन रुवरुप १ हजार ५ सय रुपैयाँ भत्ता दिने भएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्थानीय तहमा रहेका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई क्वारेन्टाइनमा रहेका मानिसले नियम पालना गरे नगरेको अनुमगन गर्ने तथा कोरोना नियन्त्रण सम्वन्धी कार्यमा सहयोग गर्ने जिम्मेवारी दिदै १ हजार ५ सय रुपिया भत्ता दिने निर्णय गरेको हो । हिजो बसेको कोरोना नियन्त्रण सम्वन्धी उच्चस्तरीय बैठकले देशभर रहेका ५० हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई कोरोना नियन्त्रण अभियानमा खटाउने निर्णय गरेको थियो।
काठमाडौँ, कात्तिक २९ गते । मेडिकल कलेजहरूले सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बाहेक विविध शीर्षकमा ठूलो रकम असुल्दा चिकित्साशास्त्र अध्ययनरत विद्यार्थी चर्को मर्कामा परेका छन् । अतिरिक्त शुल्क आतङ्कले विद्यार्थी अभिभावकलाई चिकित्सा शिक्षा निल्नु न ओकल्नु भएको छ । सरकारी निर्णयसमेत समयमा कार्यान्वयन नहुँदा निराशा छाएको छ । मेडिकल कलेजले बढी शुल्क फिर्ता गर्ने सुरसारै गरेका छैनन् । सरकारले तोकेभन्दा मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीसँग पाँच लाखदेखि २२ लाख रुपियाँसम्म बढी शुल्क लिएका छन् । शुल्क फिर्ता गराउन विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष समिति बनाएरै आन्दोलित भए पनि प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शुल्क फिर्ता दिन गरेको निर्णय पनि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष समितिका संयोजक प्रकाश चन्दले सरकारले तोकिएको शुल्कभन्दा २२ लाख रुपियाँसम्म बढी शुल्क उठाएकै कारण विद्यार्थी आन्दोलित हुनु परेको जानकारी दिनुभयो । केही समयअघि चितवनस्थित नेसनल मेडिकल कलेजका छात्रलाई छात्रावासमा गएर कुटपिट गरेको घटनासमेत सार्वजनिक भयो । कलेजले बढी शुल्क लिएको घटना सार्वजनिक…
इस्लामाबाद, २८ कात्तिक । भ्रष्ट्राचारको आरोपमा जेल परेका पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफलाई उपचारका लागि विदेश जान सरकारले बुधबार अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । उनलाई विदेश गई उपचार गर्न चार साताको मात्रै अनुमति दिएको छ । उनको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राखेर उपचारका लागि विदेश जान अनुमति दिने निर्णय गरिएको छ । सरकारको निर्णय सुनाउँदै एक मन्त्रीले भने । पाकिस्तानको तीन पटक प्रधानमन्त्री भएका भएका सरिफ अहिले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहरिँदै जेल सजाय भोगिरहेका छन् । यसअघि कारागारमै रहेका बेला गम्भीर बिरामी भएको विवरण सार्वजनिक भएपछि पाकिस्तानको एक अदालतले केही दिन अगाडि उनलाई कारागारबाट बाहिर निकालेर अस्पताल लगेर उपचार गराउन आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि उनलाई केही दिन अस्पतालमा राखेर उपचार गराइएको थियो भने त्यसपछि अति सघन कक्ष (आईसीयू) र चिकित्सकहरूको टोली उहाँकै निवासमा व्यवस्था गरिएको थियो । स्वदेशमा गरिएको उपचार पर्याप्त नभएको चिकित्सकहरुले बताएपछि उनलाई थप उपचारका लागि लण्डन लैजाने तयारी भएको हो । रासस/सिन्ह्वा
काठमाडौंको नेपाल नेसनल हस्पिटलले एकैपटक ३५ एम्बुलेन्सचालक भेला गरेर चितवनको न्यु पिस फेमिली कटेजमा भोज दियो, हस्पिटलका बिजनेस डेभलपमेन्ट अफिसरले जुनसुकै रोगका बिरामी ल्याएमा सात हजार कमिसन दिने घोषणा गर्दै ज्याकेट पनि वितरण गरे काठमाडौं,२८ कात्तिक । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकृति बढ्दै जाँदा उपचार र विश्वसनीयताका आधारमा होइन, कमिसनका आधारमा बिरामी जम्मा गर्ने प्रतिस्पर्धा बढेको छ । यही क्रममा काठमाडौंको नेपाल नेसनल हस्पिटलले एउटा बिरामी ल्याउने एम्बुलेन्सचालकलाई सात हजार कमिसन दिने घोषणा गरेको छ । बुधबार चितवनका करिब ३५ एम्बुलेन्सचालकलाई न्यु पिस फेमिली कटेजमा बोलाएर भोजसहित ज्याकेट पनि वितरण गरिएको छ । काठमाडौंको कलंकीस्थित नेपाल नेसनल हस्पिटल, जहाँ १३ आइसियू र आठ सिसियूसहित एकसय शय्या छन् । व्यापार प्रवर्द्धन गर्न अस्पतालले एम्बुलेन्सचालकसँग बिरामी ‘खरिद’ गर्ने रणनीति अघि सारेको छ । भरतपुर–१० सप्तगण्डकी रोडमा रहेको न्यु पिस फेमिली कटेज रेस्टुरेन्ट एन्ड लजमा बुधबार एम्बुलेन्सचालकको भेला गरिएको हो । उपस्थितमध्ये दुई एम्बुलेन्सचालक बुटवलबाट आएका थिए भने बाँकी चितवनकै हुन् । नेपाल नेसनल हस्पिटल कलंकीका बिजनेस डेभलपमेन्ट अफिसर समीर…
नयाँ दिल्लीमा वायु प्रदूषणको मात्रा अहिलेसम्मकै बढी, बालबालिका उच्च जोखिममा
नयाँ दिल्ली, २७ कात्तिक । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा वायु प्रदूषणको मात्रा झनै बढेको स्वास्थ्य एवम् मौसम क्षेत्रका अधिकारीहरुले जनाएका छन् । बुधबार बिहान नयाँ दिल्लीको आकासको वायुमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी प्रदुषित कणहरु भेटिन पुगेको उनीहरुको भनाई रहेको यहाँका सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । प्राप्त जानकारीअुनसार बुधबार यहाँको वायु प्रदुषणको मात्रा अघिल्ला दिनहरुका तुलनामा बढेको र हावाको प्रदुषण मापन गर्ने मापदण्ड एयर क्वालिटी इन्डेक्स, एक्युआई बढेर ५०० पुगेको बताइएको छ । यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी प्रदुषण हो । एक्युआई ५०० पुग्नु भनेको हावामा प्रदुषित वस्तुको मात्रा अति खराब रुपमा रहनु हो । हरियाणा राज्यको नजिक रहेको गुरुग्राम भन्ने नगर र उत्तर प्रदेश राज्यको छिमेकी नगर नोइडाको वायुमा रहेको प्रदुषणको मात्रा यति धेरै पुगेको ती समाचारहरुमा बताइएको छ । बुधबार बिहान यी दुई नगरमा लिइएको मापनमा यस्तो अवस्था रहेको स्वास्थ्य तथा वातावरण क्षेत्रका अधिकारीहरुले जनाएका छन् । उक्त मापनअनुसार ० देखि ५० सम्म एक्युआईलाई राम्रो मानिन्छ भने ५० देखि १०० लाई सन्तोषजनक मानिन्छ ।…
मिर्गौला तस्करीको आरोपमा निदान हस्पिटलका सिइओ र कानुनी सल्लाहकार भट्टराई सहित पाँच जना जेल चलान
काठमाडौं,२७ कार्तिक । ललितपुर जिल्ला अदालतले मिर्गौला तस्करी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका निदान अस्पतालका सिइओ विपेन्द्र प्रधान सहित चिकित्सक र कानुनी सल्लाहकारलाई जेल चलान गरेको छ। अस्पतालका निर्देशक डा राजेश पन्त ,कानुनी सल्लाहकार कुमुद भट्टराई, ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तत्कालीन अधिकृत रामचन्द्र आले र मिर्गौला लिने शंकरलाल लामालाई पूर्पक्षका लागि जेल चलान भएका हुन् । ललितपुरका एसपी गोविन्द थपलियाले उनिहरुलाइ अदालतले पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्न आदेश दिएको जानकारी दिए। सिइओ प्रधान सहित पाँच जनाले भान्जा नाता नपर्ने व्यक्तिलाई भान्जा बनाएर मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको आरोप लागेको छ। उनिहरुलाइ प्रहरीले गत असोज २९ गते पक्राउ गरेको थियो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई डा. गोविन्द केसीको खुलापत्र
काठमाडौं,२६ कात्तिक । भारतले निकालेको नयाँ नक्सामा नेपालको पश्चिमी सीमा क्षेत्रको लिम्पियाधुरासम्मको भुभाग भारतमा समेटिएको भन्दै डा गोविन्द केसीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई खुला पत्र खेल्नुभएको छ । कूटनीति र भूराजनीतिका जटिल सिद्धान्त र अभ्यासबारे आफू जानकार नभएको बताउँदै नेपालीको आत्मसम्मानमा चोट नपु¥याउन उहाँले मोदीलाई आग्रह गर्नुभएको छ । कूटनीति र भूराजनीतिका जटिल सिद्धान्त र अभ्यासबारे म जानकार छैन तर सामान्य नागरिकको हैसियतले मैले जानेको यत्ति होः जुनसुकै देशका नागरिकको पनि मर्यादा र आत्मसम्मान समान हुन्छ। भन्दै उहाँले चिठी लेख्नुभएको हो । केसीको लेखेको खुलापत्र श्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी, प्रधानमन्त्री, भारत गणराज्य कुशल छौं र यहाँको कुशलता चाहन्छौं । भारत र नेपालबीचको गहिरो र आत्मीय सम्बन्ध रातारात विकास भएको हैन । अनादिकालदेखि यी भुभागमा बसिआएका मानिसहरुबीचको अन्तरंग सम्बन्ध नै आधुनिक नेपाल र भारत निर्माण भएपछि दुई देशीय सम्बन्धका रुपमा विकास भएको हो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले आधुनिक नेपालको प्रारम्भिक नक्सा कोरेको थियो । त्यसपछिको अवधिमा ब्रिटिश…
डा. गोविन्द केसीद्धारा अनशन स्थगित (विज्ञप्ती सहित)
काठमाडौं, कात्तिक २६ गते । डा। गोविन्द केसीले आमरण अनसन स्थगित गर्नुभएको छ । देशमा सीमा विवादको मुद्दा बहस भइरहेको भन्दै उहाँले अनसन स्थगित गर्नुभएको हो । एक विज्ञप्ती जारी गर्दै डा. केसीले राष्ट्रियताको संवेदनशील विषयमा देशभरमा जनस्तरबाट आवाज उठिरहेकाले उक्त आन्दोलनलाई ध्यानमाम राख्दै हाल जारी सत्याग्रह तत्कालका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो । यस्तो छ डा. केसीले जारी गर्नुभएको विज्ञप्ती प्रेस विज्ञप्ति दुरदारजमा बस्ने विपन्न लगायत सबै नागरिकको सुलभ, सस्तो वा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो, गुणस्तरीय चिकित्सा वा स्वास्थ्य शिक्षा पाउने अधिकारका लागि हामी लामो समयदेखि लडिआएका छौं । यसै क्रममा सरकारसमक्ष विभिन्न ७ बुँदै माग र।ाखेर यही कार्तिक १७ गतेदेखि सत्याग्रहरत छौं । यही बीच समाचार आएको छ कि भारतले निकालेको नयाँ नक्सामा नेपालको पश्चिमी सीमा क्षेत्रको लिम्पियाधुरासम्मको भुभाग भारतमा समेटिएको छ । यो समाचारले अरु नेपाली नागरिकजस्तै म पनि स्तब्ध छु…
अनिन्द्राको शिकार डाक्टर र नर्स: अध्ययन
एजेन्सी । पछिल्लो समय विश्वभर अपर्याप्त निद्रा महामारी सरह फैलिरहेको पाइएको छ । अमेरिकामा मात्र एक तिहाइ भन्दा बढी जनसङ्ख्या प्रत्येक रात सात घण्टा भन्दा कम सुत्ने गरेको पाइएको छ । जसमा पनि नागरिकहरुको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएका डाक्टर ,नर्स र पुलिस निद्राबाट सबैभन्दा बढी बंञ्चित हुने समुहमा परेको हालैको एक सर्वेक्षणले देखाएको हो । जर्नल अफ कम्युनिटी हेल्थमा प्रकाशित अध्ययनका अनुसार स्वास्थ्य र सुरक्षा क्षेत्रमा आबद्ध कर्मचारीहरु अपूरो निद्राको सबैभन्दा बढी शिकार भइरहेका छन् । यसपछि जातिय अल्पसङ्ख्यक र अशिक्षित लगायत एक्लै बस्नेहरु पनि अपर्याप्त निद्राको सबैभन्दा ठूलो जोखिममा रहेको बताइएको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य अन्र्तवार्ता सर्वेक्षण अन्र्तगत एक लाख ५० हजार भन्दा धेरै मानिसहरुमा गरिएको अध्ययनका डाटालाई पुनः विश्लेषण गरिसकेपछि अनुसन्धानकर्ताहरुले यस्तो पत्ता लगाएका हुन् । यस्तोमा राम्ररी निद्रा पुर्याउन असमर्थ अमेरिकी नागरिकहरुको दर २०१० मा ३०.९ प्रतिशतबाट २०१८ मा ३५.६ प्रतिशत पुगेको पाइएको छ । जसमध्ये आधा भन्दा धेरै सुरक्षा क्षेत्रमा खटिएका व्यक्तिहरु र सेनाहरु रहेको बताइएको छ…
डा. केसीको अनशनलाई नेविसंघको साथ
डडेल्धुरा, २६ कात्तिक । डडेल्धुरामा अनसनरत डा. गोविन्द केसीको अनशनमा नेविसंघले ऐक्यबद्धता जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्ला अध्यक्षद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उनिहरुले डा. केसीको चिकित्सा शिक्षा सुधारकि अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउदै आन्दोललाई उपलब्धिमुलक निष्कर्षमा पुर्याउन अनुरोध समेत गरेका छन् । नेविसंघका पूर्वमहामन्त्रि कुन्दन काफ्ले , डोटी नेविसंघका अध्यक्ष गणेश खड्का, बैतडीका कपील केसी, डडेल्धुराका कार्यवाहक अध्यक्ष पदम भण्डारी, कैलालीका कार्यवाहक अध्यक्ष भेस बम, अछामका अध्यक्ष निर्प साउँद र दार्चलाका अध्यक्ष रमेश भट्टले विज्ञप्ती जारी डा. केसीले उठाएका मागहरु जायज भएकोले पूरा गर्न आग्रह गरेका हुन् । गोबिन्द केसि बिगत ९ दिन देखि चिकित्सका शिक्षा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै डडेल्धुरामा आमरण अनशनरत छन् ।
काठमाडौँ, २६ कात्तिक । नेपालमा ६६ प्रतिशत मानिसको मृत्यु नसर्ने रोगबाट हुने गरेको छ । विश्वमा भने ७१ प्रतिशत मानिसको मृत्यु नसर्ने रोगबाट हुने गरेको बताइएको छ । प्रदेश नं ३ सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगर्तको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयद्धारा सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सो जानकारी दिइएको हो । खासगरी शारीरिक व्यायममा कमी, आरामदायी निद्रा अभाव, नकारात्मक सोच, सन्तुलित खानाको अभाव, धुम्रपान र मध्यपानको बढ्दो प्रयोगका कारण नसर्ने रोग समेत बढ्दो क्रममा रहेको प्रदेश नं ३ अन्तरगर्तको प्रदेश स्वास्य तालिम केन्द्रका निर्देशक बद्रीबहादुर खड्काले बताए । उनले नेपालमा ८५ प्रतिशत मानिस नसर्ने रोगको समस्या लिएर अस्पताल आउने गरेका जानकारी दिए । मुटुरोग, रक्तचाप, मधुमेह, दम, अर्बुद आदि नसर्ने रोग हुन् । नेपालको मुख्य समस्या बनेको ८५ प्रतिशत नसर्ने रोगमा १८ प्रतिशत मानिसमा मानसिक रोगका बिरामी भेटिएका निर्देशनालयले जनाएको छ । यसैगरी पुरुषको तुलनामा बढी महिलामा चिन्ता र निराशा रहने, नेपालको प्रदेश नं ५ को पाल्पामा बढी मानिस कालाज्वरको समस्याबाट पीडित भएका, नेपालमा १२…
बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई ठगी अन्तर्गत मुद्दा चलाइने
काठमाडौँ,२६ कात्तिक । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएर फिर्ता नगर्ने मेडिकल कलेजलाई ठगीअन्तर्गत मुद्दा चलाउन आग्रह गर्दै गृह मन्त्रालयलाई सोमबार पत्र पठाएको छ । गत असोज २८ गते मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्ता मेडिकल कलेजलाई १५ दिने समयावधि दिँदै शुल्क फिर्ता नगरेमा कारबाही गर्ने भनी निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र पठाइएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बढी शुल्क उठाउने मेडिकल कलेजलाई सरकारले अन्तिमपटक पुनः आग्रह गरेको बताउँदै भन्नुभयो, “गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छौँ । अभिभावक तथा विद्यार्थीले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष उजुरी दिनुपर्छ । उजुरी परेका मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई ठगीअन्तर्गत मुद्दा चलाइने छ ।” उहाँले तालाचाबी बुझाउने भनेर मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले धम्की नदिँदा हुन्छ भन्दै त्यो भनेर उम्किन पाउँछु भनी सञ्चालकहरूले नसोच्दा पनि हुन्छ भन्नुभयो । उहाँले चालू शैक्षिक सत्रका लागि सरकारी मेडिकल कलेजहरूमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति र निजी मेडिकल कलेजहरूमा साविक बमोजिमकै १० प्रतिशत तथा २०…
डा. गोविन्द केसी काठमाडौं आउन मानेनन् , रित्तै फर्कियो सेनाको हेलिकप्टर
काठमाडौँ, २५ कार्तिक । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै गत आठौ दिनदेखि डडेल्धुरामा आमरण अनसन बसेका डा गोविन्द केसीलाई लिन गएको हेलिकोप्टर रित्तै फर्किएको छ । डा. केसीको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि काठमाडौँबाट नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर केसीलाई लिन डडेल्धुरा पुगेको थियो । डडेल्धुरा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन डा. जितेन्द्र कँडेलले डा. केसीले हेलिकोप्टरमा काठमाडौँ जान नमानेका कारण हेलिकोप्टर केसीलाई नलिइ फर्किएको बताए। डा. केसीलाई लिन हेलिकोप्टर पुगेपछि स्थानीयबासीहरुले पनि केसीले राखेका माग पुरा नगरी लैजान नहुने भन्दै नाराबाजी सहित प्रर्दशन गरेका थिए । आमरण अनसनका कारण डा केसीको स्वास्थ्य बिग्रिएपछि सरकारले काठमाडौं ल्याउन नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर डडेल्धुरा पठाएको थियो ।
डा. केसीलाई अनशन तोड्न शिक्षा मन्त्री पोखरेलद्वारा आग्रह
काठमाडौँ, २५ कात्तिक । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अनशनरत डा गोविन्द केसीले उठाएका मुख्य माग पूरा भइसकेको भन्दै उनलाई अनशन तोड्न आग्रह गरेका छन् । मन्त्रालयद्वारा यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पोखरेलले डा केसीले उठाएका सबैजसो माग पूरा भइसकेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न उनलाई अपिल गरे । चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग राख्दै आएका डा केसी ६ दिनदेखि १७औँ पटक डडेल्धुरा पुगेर अनशन बसेका छन् । डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गए पनि सरकारले माग सम्बोधनमा पहल नगरेको भन्दै डा केसीका समर्थकले प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । मन्त्री पोखरेलले भने, “अहिले सिङ्गो देश कालापानी र लिपुलेकलगायत नेपाली भू–भाग अतिक्रमणको बहसमा केन्द्रित भएको अवस्थामा अनशन तोडेर राष्ट्रियताको विषयमा केन्द्रित हुन आग्रह गर्दछु ।” कालापानी, लिपुलेकलगायत नेपाली भूभाग अतिक्रमणबारे भारतसँग कूटनीतिक रुपमा समाधानको माग गर्दै विभिन्न राजनीतिक भ्रातृ सङ्गठन, नागरिक समाज र युवाले विभिन्न सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । कालापानी, लिपुलेकलगायत नेपाली भूभागलाई भारतीय क्षेत्रका रुपमा…